Ashampoo Burning Studio 11 v11.0.4...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Ashampoo Burning Studio 11 v11.0.4 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ဒီကောင်လေးကတော့ Update လေးပါ...!Anonymous အကူညီတောင်းထားလို့ပါ..!"အကို တစ်ခုတော့ကူညီတောင်ပါရစေ Ashampoo Burning Studio 11
သုံချင်းလို့ ပါ ရှိရင်တင်ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..." Anonymous ရေ ကျွန်တော် Registration ဖိုင်လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...! သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်...! Install လုပ်ပြီးရင် Registration ဖိုင်လေးကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် Full Version လေးဖြစ်သွားမှာပါ...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့175.61 MB ရှိပါတယ်...!အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1 Response to Ashampoo Burning Studio 11 v11.0.4...!
ဒီကောင်က အသစ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်....ငါ့မှာရှိတာက ဗားရှင်းဘယ်လောက်လဲတောင်မသိဘူး...လိုချင်ရင် လာယူမယ်ဟေ့.....ကျေးကျေး